Buuhoodle oo laga taageeray Ra’isal Wasaaraha Cusub (Sawiro + Dhegaysi) – Radio Daljir
Buuhoodle oo laga taageeray Ra’isal Wasaaraha Cusub (Sawiro + Dhegaysi)
Oktoobar 7, 2012 9:27 b 0
Buuhoodle Oct 7-Kadib markii maalintii shalay M/weynaha Cusub ee Jamhuuriyada Federalka ah ee Somaliya Xasan Sh Maxamuud uu magacaabay Ra’isal Wasaare Cusub oo uu u doortay Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Cayn ay si weyn usoo dhoweeyeen Masuulka loo magacaabay xilka Ra’isal Wasaare nimo ee Somalia.
Dadweynaha oo shucuurtooda ku muujiyey dibadbax ay isgu yimaadeen Gegida kubada Cagta ee Buuhoodle ayaa soo dhoweeyey Ra’isal Wasaara Cusub iyagoo ugu baaqay inuu umada Somaaliyeed ku hogaamiyo Sinaan iyo Cadaalad.
Caaqil Maxamed Nuun Maxamed oo kamid ah cuqaasha deegaanka Buuhoodle ayaa ka hadlay munaasibada soo dhoweynta Ra’isal Wasaare Saacid, wuxuu sheegay in Ra’isal Wasaaraha looga fadhiyo dib u dhiska dal burbursanaa Rubuc Qarni aysana yarayn hawsha hortaalaa.
Caaqil Axmed Xasan X Cumar ayaa isna kamid ahaa cuqaashii ka hadashsy Dibadbaxa lagu soo dhoweynayey Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somaliya, waxaana Caaqilku ugu baaqay Ra’isal Wasaaraha inuu ilaaliyo Midnimada iyo Qaranimada Somaaliya.
Dibadbaxan maanta ka dhacay Buuhoodle ayaa ahaa mid loogu dabaal degayo Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somalia, oo shalay loo magacaabay Cabdi Faarax Shidoon (Saacid), waxaana dadkii madasha ka hadlay oo isugu jirey siyaasiyiin, madax dhaqameed, iyo ururada bulshada ay siweyn usoo dhoweeyeen Ra’isal Wasaaraha Cusub.
Aqoon-yahan beeniyay inuu diray Fariin ka dhan ah Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somaliya